Fatratra isam-bolana maherin'ny 50,000 tompona orinasa, mpanapa-kevitra, matihanina amin'ny varotra ary matihanina amin'ny varotra.
Ny 77.3% amin'ireo mpitsidika dia tonga avy amin'ny valin'ny motera fikarohana.
Voadika (masinina) amin'ny fiteny 100 mahery miaraka amin'ny anglisy 70%.
Mpampiasa mailaka mirotsaka an-tsehatra 30,000 isan'andro sy isan-kerinandro.
Ny mpanaraka media sosialy manaraka dia misy mpanaraka 50,000 XNUMX mahery.
Tombontsoa ho an'ny mpitsidika
Ny mpitsidika anay dia manadihady, mahita ary mianatra ny varotra manaraka sy ny haitao marketing ary ny paikady mifandraika amin'izany. Ny Analytics dia manondro ireo ho mahaliana indrindra:
Serivisy amin'ny doka sy marketing
Rindrambaiko fandraharahana sy famokarana
Serivisy amin'ny Internet
Serivisy SEO & SEM
Martech Zone tompon'ny sy tantanan'i DK New Media, LLC, masoivohon'ny Douglas Karr. Raha mila tatitra an-tsipiriany momba ny fanadihadiana ianao dia mifandraisa amiko.
Hangatahana ny sponsorship
Afaka mamorona fandaharana manokana ho anao koa izahay mifototra amin'ny fitaovana, firenena, sokajy, ary isan'ny daty. Mba omeo pitsopitsony izahay mba hifampiresahanay aminao. Azafady, AZA mampiasa ity taratasy ity ho fampahalalana momba ny lahatsoratra karama na fangatahana backlink. Ho voafafa ny fangatahanao. Tsy manome backlink karama izahay.